ACHITLWINPYIN - Page6of 10 - Online Media
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး (၅) မျိုး
အရပ်ရှည်တာ၊ အသားညိုတာ၊ ရုပ်ရည်ချောမောတာတွေအပြင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေကို အကဲခတ် တိုင်းတာတတ်တဲ့ အခြား အရည်အချင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ အဲဒီအရည်အချင်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကြည့်ရအောင်။ ၁။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား ။ မိန်းကလေးတွေအတွက် အရေးကြီးတာက သူတို့ လက်တွဲတဲ့ အမျိုးသားမှာ ဟာသဉာဏ်ရှိပြီး သူမကို အရယ်မောနေအောင်…
စာသင်ရုံတင် မဟုတ်ပဲ… အလှပါ ပြင်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာကြီး
အမုန်းခံအလှ လှပခမ်းနားသော ဖိတ်စာတစ်စောင်.. ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဦး နှင့် ဒေါက်တာသီတာမိုး ” ဖေဖေ… ဒီဖိတ်စာ သမီးကိုပေးနော်… သိမ်းထားချင်လို့” ရှစ်တန်းကျောင်းသူ သမီးငယ်က ဖိတ်စာကိုအိတ်နဲ့တကွ အပိုင်ယူလိုက်သည်။ ” အဲ့ဒီ ဖိတ်စာတစ်စောင်ကို နှစ်ရာကျတယ်တဲ့…..” ဒေါ်မြအေးက ဈေးသည်ပီပီ ကျောက်ဆည်ဈေးထဲမှာ သတင်းကြားခဲ့ပြီ။ ” ဆန်းသစ်လွင်…
မောင်သိထားစေချင်ပါသည်။ မောင်သိထားရမယ့် … ကျွန်မရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေပေါ့။
မောင်သိထားစေချင်ပါသည်။ မောင်သိထားရမယ့် … ကျွန်မရဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေပေါ့။ ၁။ကျွန်မစိတ်တွေဆိုးပြီး မောင့်ကိုထွက်သွားထွက်သွားဆိုပြီး ထုရိုက်တဲ့အခါ… တကယ်ထွက်မသွားပါနဲ…. အမှန်တော့ကျွန်မလက်တွေကို ဖမ်းဆုတ်ထားပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ထားစေချင်တာပါ… ၂။ကျွန်မစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့အခါ ကျွန်မကိုစိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့… အမှန်တော့မောင်ချော့တာလေးတွေကို စိတ်ထဲကကြည်နူးနေချင်တာပါ.. ၃။ကျွန်မမောင့်စကားကိုနားမထောင်ဘဲ လုပ်ချင်တာလုပ်မိတဲ့အခါ…. ကျွန်မကိုမအော်လိုက်ပါနဲ့… မောင်တခါတလေလူကြီးလေးလိုဆူတာ ပြောတာလေးတွေကြားချင်နေတာပါ… ၄။ကျွန်မနေမကောင်းချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ မောင်စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့။ မောင်ဂရုစိုက်တာလေးတွေကို…
သတိထားဆက်ဆံရမယ့် သင့်နားက လူ (၈) မျိုး ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ၁ တင်စီးသူများ သူတို့အတွက် တင်စီးတာဟာ ယုံကြည်မှုရှိတာပါ။ မာန ဟာ ဘဝနေထိုင်နည်းပါ။ ဘေးနားကလူတွေထက် အမြဲသာကြောင်းပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ ဒီ လူ တွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး မပတ်သက်ပါနဲ့။ ၂ မနာလိုသူ မနာလိုတာပါ။…
အရာရာ ဆုံးရှုံး ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓါတ် မဆုံးရှုံးသရွေ့ သင်မလဲသေးပါဘူး…။
လောကကြီး တစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ အားလုံး ဆုံးရှုံး သွားပြီလား။ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရာမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ မှ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ ၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ မျှော်လင့်ချက် ၊ အလုပ် အရာရာတိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအောက်မှာ အရာအားလုံး မျက်လှည့် ပြလိုက်သလိုမျိုး ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး…
လက်တွဲဖော်ရွေးတဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကြည့်သင့်သည့်အချက်များ
ရုပ်ရည်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ စိတ်ထားကောင်းမှသာ သင့်အပေါ်ကို လည်းကောင်းပြီးချစ်မှာပါ။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ရုပ်ရည်ထက် စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မိဘအပေါ်သိတတ်တဲ့သူမျိုး သင့်မိဘအပေါ်မှာရော သူ့မိဘအပေါ်မှာရော သိတတ်တဲ့သူမျိုးကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင်တို့ရဲ့ချစ်သူဘ၀ရော၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာပါ သာယာမှာသေချာပါတယ်။ သူ့မိဘကို သိတတ်တဲ့သူမျိုးကို ရွေးချယ်ရင် သူ့မိဘကို သိတတ်သလိုမျိုး သင့်မိဘကိုပါ သိတတ်မှာပါ။ သင့်မိဘကိုလည်း မိဘအရင်းလိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံမှာပါ။ အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့သူမျိုး…
အမဲသားစားခြင်း နှင့် နွားတစ်ကောင်ရဲ့ တောင်းဆု
အမဲသားရှောင်တာဟာ လောကီအကျုိး ရှိ/မရှိ (အမေး)။ ။ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက လူတွေအား အမဲသားလှူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အမဲသားရှောင်ြပီး မေတ္တာပို့တဲ့အတွက် မြို့တစ်မြို့မှာ ဘီလူးသဘက်စတာတွေကို ဟန့်တားနိုင်တယ်လို့ စာဖတ်ဖူးပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်သိချင်တာက အမဲသားစားတာကို ရှောင်ခြင်းဖြင့် လောကီအကျိုး ရှိ/မရှိဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ကိုကိုအောင်။ ဆန်ဖရန်စ္စကို (အဖြေ) ။…
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအားလုံးက သင်ရှာနိုင်တာထက် လျှော့ပြီးသုံးဖို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အသုံးစရိတ်က ၀င်ငွေထက် နည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးနေတာ မှန်ပေမယ့် သေချာနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၀င်ငွေထက် နည်းတဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုရော ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါသလား။ အများစုအတွက်တော့ ၀င်ငွေထက် လျော့နည်းတဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ နေထိုင်ဖို့က ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အိမ်ငှားခတွေ၊…